Ny toeram-pitrandrahana mpanjaka Solomon (ampahany 20) - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2017-01 mpandimby ny Magazine > Ny Harenan'i Solomona Mpanjaka (ampahany 20)
Vehivavy mpitondratena efa antitra lasa any amin'ny fivarotany. Tsy misy zavatra manokana izany satria be dia be ny fiantsenana ao, nefa tsy ho toy ny olon-drehetra io andro io. Rehefa nanosika ny làlamby fiantsenana teny amin'ny lalantsara izy, dia nisy lehilahy iray nitafy fitafiana nanatona azy, namihina ny tanany ary niteny hoe: “Arahabaina! Nandresy ianao. Mpanjifolo arivo izy ireo ary izany no antony nandresen'izy ireo an'arivony euros! » Faly be ilay tovolahy kely. »Eny» hoy izy: »ary raha te hampitombo ny tombom-barotra anananao ianao dia manome ahy $ 1400 ihany - ho an'ny saram-panolorana - ary hitombo hatramin'ny 100.000 ny vola miditra aminao.» Fanomezana izany! Ilay renibe 70 taona dia tsy te-hahita an'io fotoana mahafinaritra io ary niteny hoe: "Tsy manana ahy ny vola be amiko, fa afaka mandeha mody haingana aho." 'Fa be vola izany. Mety hieritreritra ve ianao raha nentiko any amin'ny tranonao ianao, mba tsy ahitany izay nitranga taminao? » hoy ny Tompo.
Nieritreritra vetivety izy, saingy nanaiky izy - na izany aza, izy dia kristiana ary Andriamanitra tsy hamela zavatra hitranga ratsy. Tena manaja sy manaja azy koa ilay lehilahy, izay tiany. Niverina tany amin'ny efitranony izy ireo, saingy hita fa tsy manam-bola any an-trano izy. "Maninona izahay tsy mandeha any amin'ny bankinao ary maka ny vola?" "Eny akaikin'ny zorony ny fiarako, tsy ho lava izany." Manaiky izy. Hahemotra ny vola amin'ny banky ary omeny an'ny Tompo. "Arahabaina! Omeo fotoana kely aho Handeha haka ny taratasinao amin'ny fiara aho. » Azo antoka fa tsy mila milaza aminao ny tohin'ny tantara aho.
Tena tantara iray io - ny vehivavy antitra no reniko. Akory ianao raha gaga. Ahoana no mety hahatonga azy ho mora misafoaka? Isaky ny milaza an'io tantara io aho dia misy olona iray izay niaina toy izany koa.
Avy eo, misy mailaka rojo vy: "Raha ampitainao amin'ny olona dimy ao anatin'ny dimy minitra ny mailaka, ho lasa manankarena amin'ny fiainanao avy hatrany ny fiainanao." na "Raha tsy ampidirinao avy hatrany amin'ny olona folo ity mailaka ity dia hialana vintana mandritra ny folo taona ianao."
Nahoana ny olona no iharan'ny fandrobana toy izany? Ahoana no ahafahantsika mitsaratsara kokoa? Manampy antsika amin’izany i Solomona ao amin’ny Ohabolana 14,15: “Ny adala mbola mino ny zavatra rehetra; fa ny hendry kosa mitandrina ny diany. Ny hoe tsy takatry ny saina dia misy ifandraisany amin'ny fomba fiasantsika amin'ny toe-javatra iray manokana sy ny fiainana amin'ny ankapobeny.
Afaka matoky be loatra isika. Ho talanjona amin'ny fisehoan'ny olona isika. Afaka ny ho marina sy matoky isika fa tsy mivadika amintsika ny hafa. Ny fandikana ny Baiboly dia milaza toy izao: "Aza adala ary minoa izay rehetra renao, ho hendre ary fantaro izay alehanao". Avy eo misy ny kristiana izay mino fa raha ampy ny fahatokisana an’Andriamanitra dia ny zava-drehetra no mahatsara azy indrindra. Tsara ny finoana nefa ny finoana ny olona tsy mety dia mety ho loza.
“Jesosy tonga hanaisotra ny otantsika fa tsy ny saintsika”. Eritrereto ny olon-kendry. Jesosy mihitsy no nilaza hoe: “Ary tiava an’i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra” (Marka 1.2,30).
Misy lafin-javatra hafa koa tsy maintsy dinihina: Ny fahatokisana tafahoatra amin’ny fahaizana mahazo zavatra, ny mitsara azy ary mazava ho azy fa mitana anjara toerana lehibe koa ny fitiavam-bola. Indraindray ny olona malemy finoana dia mandray fanapahan-kevitra maimaika ary tsy mieritreritra ny ho vokany. “Efa tara loatra ny herinandro ho avy izao. Avy eo dia hisy olon-kafa hanana izany, na dia naniry mafy aza aho. “Ny fisainan’ny sahirana dia mahavokatra be; fa izay haingana loatra dia ho ory” (Ohabolana 21,5).
Mitady fanampiana. “Raha tsy misy fahendrena, dia very ny firenena; fa izay misy mpanolo-tsaina maro, dia misy famonjena.” (Ohabolana 11,14).